ब्रह्मा र देवदूत संवाद | SouryaOnline
ब्रह्मा र देवदूत संवाद
सौर्य अनलाइन २०६९ फागुन २६ गते ०:०० मा प्रकाशित
ब्रह्माले भर्खरै नदी, जंगल, खेत, पहाड र हिमालहरूको सृष्टि गरेका थिए । आकाशबाट तलतिर नियाल्दै ब्रह्मा बूढा आफैँ मुग्ध भए, ‘आहा † कस्तो सुन्दर धर्ती † चन्द्रमाको मुस्कान, गुलाफको सुगन्ध र महको माधुर्य । वीरभोग्या बसुन्धरा, साहसीहरूले भोग्नलायक धर्तीमा जीवन बिताउने प्राणी पो कस्तो बनाउँm ?’
ब्रह्माले हीरा, मोती, पन्ना, सुन, चाँदीहरू पगाले । हरेक धातुको घोललाई मानिसको आकारमा उभ्याए । तर, कुन्नि किन हो ब्रह्मालाई उपयुक्त लागेन । अनेक प्रयोग गर्दागर्दा धेरै ढिलो भइसकेको थियो । आखिरमा उनको मस्तिष्कमा अपूर्व विचार फुर्‍यो । उनले शुद्ध माटोको एउटा मूर्ति बनाए र त्यसैमा प्राण फुकिदिए ।
त्यसैबेला एक देवदूत आइपुग्यो । विधाताको यो अनौठो रचना देखेर आश्चर्यचकित हुँदै सोध्यो, ‘तपाईंले यो के बनाउनुभयो ?’
ब्रह्माले आफ्नो कलाकारितामा गर्व गर्दै भने, ‘यसको नाम जीवन हो । मेरो सर्वश्रेष्ठ कृति ।’
‘क्षमा गर्नुहोला विधाता † तर, यसको शरीर माटोले किन बनाइदिनुभएको ? माटो त तुच्छभन्दा तुच्छ, जडभन्दा जड वस्तु हो । माटो नलिएर कुनै धातु लिएको भए हुन्थ्यो नि । हीरामोती वा सुनले नै बनाएको भए पनि उत्तम हुन्थ्यो,’ देवदूतले किञ्चित् आश्चर्य मान्दै सोध्यो ।
देवदूतको स्वाभाविक जिज्ञासा सुनेर ब्रह्मा बूढाको ओठमा एउटा मोहक मुस्कान दौड्यो । उनले भने, ‘बन्धु, यही हो जीवनको रहस्य । माटोको शरीरमा मैले सृष्टिको सारा सुख, सौन्दर्य र वैभव भरिदिएँ । जडमा आनन्दको चैतन्य फुकिदिएँ । मानिसले शरीरको जस्तो चाहन्छ उस्तै उपयोग गर्न सक्छ । शरीरलाई महत्त्व दिनेले माटोको जस्तै जडता भोग्नेछ, शरीरभन्दा माथि उठ्नेलाई आनन्दका तहतह अनुभूति हुनेछ । मैले सबै कुरा क्षणिक बनाइदिएको छु ताकि जीवनको हरक्षण मूल्यवान् होस् । हरक्षण सजगतामा रहन जरुरी होस् । ढोकाको पाटो सर्केझैँ बिछ्यौनामा कोल्टे फेर्दै सुतिराख्ने अल्छीहरूले उति नै जीवन गुमाउनेछन् ।’
देवदूतको चित्त बुझेको थिएन । किञ्चित् शंका गर्दै देवदूतले भने, ‘तपाईंले भनेजस्तो जीवनको उच्चतम आनन्द कुनै सर्वश्रेष्ठ धातुको चहकिलो शरीरमा भरिदिन सकिँदैनथ्यो ? सुनमा सुगन्ध हुनेथियो ।’
‘अहँ, सुनमा सुगन्ध हुनै सक्दैन । सुगन्ध त माटोमा मात्र सम्भव छ । यही कारणले त सृष्टि अद्भूत रहस्यमय बनेको छ † तिमी माटोका अवगुण मात्रै देख्छौ । गुणहरू देख्दैनौ । माटोमा अद्भूत उत्पादकत्व हुन्छ । माटोमै अंकुर पलाउँछन् । माटोले बनेको शरीरको विशिष्ट उपयोगिता छ । मानिसले शरीरको बाहिरी रूपरंगलाई सिँगार्दै बस्न पनि सक्छन्, भित्री सौन्दर्य फेला पारेर त्यसमा रमाउन पनि । चेतनाको गहिराइमा अनुभूति हुने आनन्दका क्षणमा मैले सृष्टि रचना गरेको हुँ । तिमीले उपनिषद्मा पढ्यौ होला— आनन्दादेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते ।’
‘हो, पढेको थिएँ । आनन्दबाटै सृष्टि हुन्छ, आनन्दमै चलिराख्छ र आनन्दमै विलय हुन्छ । सायद यही कुरा बुझेर श्री अरविन्दले भनेका छन्, आनन्द नै रहस्य हो । परम आनन्द अनुभूति गर्न सिक्यौ भने तिमीले सृष्टिकर्तालाई देख्नेछौ ।’
देवदूतलाई कौतूहल लाग्दै थियो । उनले सोधे, ‘परम आनन्द कसरी अनुभूति हुन सक्छ ?’
ब्रह्माले एकछिन आँखा बन्द गरे । लामो श्वास लिए र देवदूतलाई सम्झाउन थाले, ‘सिर्जनशील काम गर्नेलाई काममै आनन्द अनुभूति हुन्छ । ध्वंसात्मक र विनाशकारी काम गर्नेलाई अपराधबोध र ग्लानि हुन्छ । कर्मको फल शरीरमा तत्काल देखापर्छ । पाप गर्नेको मन जलिरहेको हुन्छ, कताबाट पापको पोल फुस्केला भन्ने चिन्ता हुन्छ । भलो गर्नेको मन प्रशन्न हुन्छ । मानिसले स्वविवेकको प्रयोग गर्न सक्छ । कुन काम गर्ने, कुन नगर्ने भन्ने छनोट गर्न पाउँछ । चित्तनदी नामो उभयतो बाहिनी, पुण्याय च बहति, पापाय च । चित्त नामको नदी दुवैतिर बग्न सक्छ, पुण्य कर्मतिर बग्न पनि सक्छ, पापतिर ओरालो लाग्न पनि सक्छ । मैले जानीजानी मानिसको मनको स्वभाव चञ्चल बनाइदिएको छु । ताकि मानिस हरपल सजग रहोस् । अलिकति बेहोसी भएमा मानिसको मन पापतिर बग्न थालिहाल्छ । पछुतो र दु:ख भोग्न नपरोस् भनेर मानिस हमेसा वर्तमान क्षणमा होसपूर्वक बाँच्नुपर्छ, यही नै जिउने कला हो । विगतको चिन्ता र भविष्यको कल्पनामा रुमल्लिने र कुन बेला के गर्दै छु भन्ने होस नहुनेले दु:ख नपाए कसले पाउँछ त †’
सृष्टिकर्ता ब्रह्माको चातुर्य देखेर देवदूत प्रभावित भयो । बोलीमा केही श्रद्धाभाव ल्याएर उसले अर्को शंका व्यक्त गर्‍यो, ‘तपाईंले धेरै विचार पुर्‍याएर मानिस रच्नुभएछ । तर, मानिसले जीवनको गहन रहस्य बुझ्ला भन्ने लाग्दैन । मैले धेरै समानान्तर ब्रह्माण्डको भ्रमण गरेको छु । अन्य ग्रहका मानिसको स्वभाव कहाँसम्म देखेँ भने भौतिक शरीरबाट प्राप्त हुने सुखलाई नै मुक्ति भन्ठान्छन् । एउटा ग्रहको महाकविले भन्थ्यो, ‘सुन्दर युवतीहरूलाई पेन्टी र ब्राबाट मुक्त गरेपछि मात्र पुरुषलाई मोक्षको आनन्द प्राप्त हुन्छ ।’
देवदूतको कुरा सुनेर ब्रह्मालाई खेद भयो । ‘यौनको मामलामा मानिस र चौपाया उस्तै छन् । बरु पशु एक ऋतुमा मात्र सम्भोग गर्छन् । सम्भोगमा चेतनाको आनन्दको एक झलक मात्र प्राप्त हुने हो । त्यही एक झलकमा सन्तुष्ट हुन्छन् भने मेरो के लाग्छ । शरीर त उपहार हो । उपहारको प्याकेट खोलेर भित्र हेर्नेले चेतनाको अद्भुत आनन्द पाउँछन्, केवल खोल चाटिराख्नेलाई यही बानी पर्छ । नयाँनयाँ खोल चाहिन्छ । यज्ञकुण्डमा जति हवन गरे पनि आगोको ज्वाला शान्त हुँदैन ।’
ब्रह्मालाई हल्का विरक्ति लाग्यो । यद्यपि संयमित हुँदै भने, ‘म एक छिन ध्यानमा बस्छु । तिमी पृथ्वीको भ्रमण गरेर आऊ । एक चक्कर लगाएपछि यहीँ आउनु र मेरो सम्पूर्ण सृष्टि तिमीलाई कस्तो लाग्यो, बताउनू ।’
पृथ्वीको भ्रमण पूरा गरेर फर्केपछि देवदूतले ब्रह्मालाई दण्डवत् गरेर भने, ‘प्रभो, पदेपदे यत् नवतां उपैति तदेव रूपं रमणीयताया । म जहाँजहाँ पुगेँ त्यहाँ पाइलापाइलामा सौन्दर्य देखेँ, कणकणमा भगवान् देखेँ र प्रत्येक श्वासमा आनन्द अनुभूति गरेँ । एकाबिहानै सूर्य होली खेलेर निस्कँदो रहेछ र हिमाललाई रङ छेपेर राताम्मे बनाइदिँदोरहेछ । बर्खाको हिलो राम्रो, शरदको चाँदनी राम्रो, वसन्तका पालुवा राम्रा …।’
‘धर्तीको सुगन्धै बेग्लै । घामले गर्दा दिन उज्याला, ताराले गर्दा रात रमाइला । पारखी आँखामा त सर्वत्र सौन्दर्य देखिँदो रहेछ । घाम डुबेपछि सन्ध्या पृथ्वीमा ओर्लन्छे । कसैलाई पर्खेर बसेकी सन्ध्याको मनभरी अनुराग सल्बलाइरहेको हुन्छ । ठीक त्यतिबेलै, जून उदाएर उसलाई यस्तरी चुम्बन गर्छ उसले आफ्नो निष्पट्ट अँध्यारो सारी सर्लक्क खसेको पत्तै पाउँदिन ।’
मीठामीठा फल खाएको सम्झँदै देवदूतले अगाडि भने, ‘सृष्टिका फलहरू सुस्वादु र अमृततुल्य रहेछन् । तर, आँपको मीठो फलमा त्यति ठूलो कोया किन राख्नुभएको ? अनि, स्त्रीका स्तनमा कोया नै नराखिदिनुभएको । सुन्दरीहरूका स्तन लत्रिएपछि सौन्दर्य पनि खस्कँदोरहेछ ।’
मैले धेरै अनौठा दृश्य देखेँ । कुनै बस्तीमा घुम्दै थिएँ । एक ठाउँमा एउटा लहरामा विशाल फर्सी फलेको देखेँ । एमानको फर्सीले थाँक्रोबाट लहरालाई नै चोइटाइदिएको थियो । मैले सोचेँ, यो फर्सीले आफैँले धान्न नसक्ने फल किन फलाएको होला ? मैले त केही बुझ्न सकिनँ ।’
‘हेर्नुस् न, कति ठाउँमा त आपत् आइलाग्यो । एक ठाउँमा थकाइ मार्न ओखरको रूखमुनि बसेको थिएँ । अचानक ओखर खसेर टाउकोमै लाग्यो’ देवदूतले टाउकोमा टुटिल्को देखाउँदै भने ।
ब्रह्माले देवदूतको टाउको सुम्सुम्याउँदै भने, ‘देवदूत, त्यो ओखरको विशाल वृक्षमा फर्सीजत्रै फल लागेका हुन्थे भने †’
‘मेरो टाउको त रोटी पर्ने थियो नि ।’
ब्रह्माले शान्त हुँदै भने, ‘सृष्टिको रहस्य यही हो । ओखरको विशाल वृक्षमा सस्याना फल लाग्छन् । फर्सीको मसिनो लहरामा विशाल फर्सी फल्छन् । जहाँ जे देख्छौ त्यसको पछाडि कारण हुन्छ । कार्यकारण सम्बन्धबाटै सृष्टि चलिरहन्छ । हरेक व्यक्ति, वस्तु र घटना रहस्यमय हुन्छन् । तिनलाई यथाभूत स्वीकार गर्नु र आफ्नो आवश्यकता र क्षमताअनुसार उपयोग गर्नु बुद्धिमानी हो । जुन दिन जहाँतहाँ व्यर्थमा नाक रगड्ने बानी छुट्छ, त्यही दिन मानिस मुक्त हुन्छ– ‘स्वीकार मात्रै गर एक बार संसार तिम्रै अनि बार बार ।’